Veloma ry Bossert Hotel
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Umbundu Valencienne Xhosa Zoloa tzeltal
Namidin’ny Vavolombelon’i Jehovah ny Bossert Hotel tamin’ny Novambra 2012, ary efa hafa ny tompony izao. Nanamarina farany an’ilay trano ny Vavolombelona ary lasa. Hampiasaina hampandrosoana ny asa fampianarana Baiboly ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah ny vidin’ilay trano.
Misy rihana 14 ilay trano ary miendrika trano italianina fahiny. Namidin’ny Vavolombelon’i Jehovah ilay izy satria hiala ao Brooklyn, New York, ny foibeny ary hifindra any Warwick, New York. Mety ho afaka taona maro vao ho vita izany fifindrana izany.
Zato taona lasa izay
I Louis Bossert, mpivaro-kazo tao New York, no nanorina ny Bossert Hotel, tamin’ny 1909. Saika hatao “hotely fandraisam-bahiny” ilay izy sady natao hipetrahan’ny olona koa. Nandeha be ilay izy ka nohalehibeaziny, tamin’ny 1914, ary efa ho avo roa henin’ny habeny tamin’ny voalohany ilay izy rehefa vita. Nampiana hotely fisakafoana tany an-tampon’ilay trano, tamin’ny 1916.
Novidin’ny Vavolombelon’i Jehovah ilay trano, taorian’ny 1980 ary nohavaoziny. Hipetraka ao mantsy ny olona sasany hiasa any amin’ny foibeny, ka nila namboarina mba hifanaraka amin’izay nilain’izy ireo ilay trano. Novana ho efitra fisakafoana ireo efitra fandihizana, ary novana ho efitra fialana voly ilay fisakafoana tany an-tampon-trano, mba hampiasain’ireo hipetraka ao sy ny vahininy.
Vavolombelon’i Jehovah avy any amin’ny tany samihafa tonga hitsidika ny foibe no efa nivahiny tao nanomboka tamin’ny 2010.
Mikasa hanova an’ilay trano ilay tompony vaovao ary tiany hatao hotely fandraisam-bahiny ilay izy. Tsy ho sarotra ny hanova an’ireo efitra tsotsotra misy fandriana iray ho hotely mirenty, satria voakojakoja tsara ilay trano.
Fanavaozana an’ilay trano
Efa tsy nisy nikarakara hatramin’ny ela ny Bossert tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah mbola tsy tao. Naloto be ny ivelany, simba ny fetan-tany natao haingon’ny sisin’ny tampon-trano, simbasimba koa ny varavarankely, ary voromailala no nipetraka tany an-tampon-trano. Natao àry ny tetikasa hanavaozana an’ilay trano. Nandany fotoana maro sy nandany ron-doha hamitana an’ilay tetikasa ny Vavolombelon’i Jehovah avy any amin’ny faritra samihafa manerana an’i Etazonia, ka vita ilay tetikasa tamin’ny 1991.
Nanadio sy nanamboatra ny rindrina ivelany vita amin’ny vatosokay sy vato ireo Vavolombelona. Nesorina ilay feta tamin’ny sisin’ny tampon-trano ary nosoloana haingony vaovao, mba hitovy tanteraka amin’ny taloha ny endrik’ilay tampon-trano. Nosoloana koa ireo varavarankely ka lasa mihaja be.
Namboarina tanteraka koa ny anatin’ilay trano, ka natao tsara tarehy toy ny fahiny ny fandraisan’olona. Vato nalaina avy tany amin’ilay toerana famakiam-bato tany Italia no nanamboarana an’ilay rindrina simba vita amin’ny marbra. Nolalorina koa ilay valin-drihana satria simban’ny rano.
Teo amin’ireo andry vy lehibe maro mitandahatra no nampananosarotra. Nitovy endrika tamin’ny marbra izy ireo tamin’ny voalohany, noho ilay fomba fandalorana italianina nanaovana azy. Niovaova anefa ny tompon’ilay trano ary nolokoan’izy ireo imbetsaka ireo andry. Tsy nisy nahay an’ilay fomba fandalorana manokana ireo mpiasa an-tsitrapo nanavao an’ilay trano. Nanana boky manazava ny fanaovana an’ilay izy ny tranombokin’ny oniversite tsy lavitra teo. Nianaran’izy ireo àry ilay teknika ary nandany herinandro maromaro izy ireo mba hanovana an’ireo andry hitovy amin’ny paoziny tamin’ny voalohany.
Vita ny asa tamin’ny 1991, ka azo nampiasaina ilay trano tsara tarehy. Nahazo ny loka Lucy G. Moses Preservation Award ny Bossert ho mariky ny fankasitrahana ny ezaka natao hihazonana ny endrik’ilay trano ho toy ny tamin’ny voalohany.
Veloma ry Bossert Hotel ao Brooklyn, New York